HomeWararka Maanta“Guushii Bayern Waxay Ahayd Mid Bilaa Xallad Ah.”Martins Indi
Ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda Porto ee Bruno Martins Indi in guuldaradii 6-1 ka ahayd ee Bayern Ku Xasuuqday ay ahayd “mid ka madhan xiise iyo xallad toona gebbi ahaanba”.
Kooxda martida ahayd ayaa la shir timid is aragga labaad iyadoo sidata 3-1 faa’iido ah oo ay ciyaartii hore soo shaqaysteen, balse ku kufay Garoonka Alliaz Arena oo ceebi ka raacday kadib markii guuldaro 6-1 ah ay kala kulmeen Munich, iyo celcelis goolal ah oo dhan 7-4.
Laacibka xulka Netherland ee Martins Indi ayaa ku sifeeyey waxa hellay kooxdiisu inay ahayd bilaa khibrad sababtay in qaybtii hore ee ciyaartaba si weyn loo kala daadiyo.
Isagoo u waramaya warfidiyaha Sport1, wuxuu yidhi: “Tani waxay ahayd guuldaro aad u baaxad weyn, dabcan, aad baanu u niyad jabnay. Waxaanu halkan nimid anagoo kalsooni badan qabna, laakiin si degdeg ah baa naloo muquuniyey.
“Wali laba ciyaarood oo sidan ah maanaan guuleysanin, iyaguna waxay khibrad badan u lahaayeen sida loo maroorsado guusha. Qaybtii dambe ayaaban woxogaa dhaanay, laakiin Bayern ciyaartan waxay ahayd mid aad u awood badan, waana taas ta na dishay.
“Tani waa waxa ay awooda sarre ee kubada cagtu u tahay awooda sare mar kasta. Markii garoonkayaga la joogay waanu ciqaabnay, khaladaad badana wey sameynayeen, todobaadkana anaga ayaa sidii si lamid ah naloo gallay. Gebbi ahaanba ma ahayn mid xalad iyo xiise toona leh.”
Rooney Miyuu Ka Fadhiisanayaa Ciyaaraha Caalamiga ah?
23/08/2017 Abdiwahab Ahmed
Watch Aberdeen 2-1 Rangers – Highlights and Goals
Mourinho: Samayn Maayo Khaladaad Xili Ciyaareedka Labaad Ee Man United